Oromia Center For Human Rights: Exposing the Massive Human Rights Violation in Oromia: November 2009
Seena Nairobi xiqqoo ishee
Suraa Dhugaa irraa
Mee wattii dubadhuu?
yoo kan na dhagesuu,
barri darbuu geessu
kan ati cufaa tessuu
firi nabarbadee eessaa ana haabaasuu?
Akkuma karchallee kessan si shoggorruu
hairan jedhaan kana akam baruu
hugaamoo ajadhaa ana kani ol nagurruu?
warrii achi jirtaan isiin haa bararruu
bishaan lafaa gurruu
hammii achii kessaa isaa walgurgurruu
du'aaf wal aburruu
waaqayyoo guddaan isiin haa bararruu!!
Wayyaa nairobii silaaf maalan godha
bakka dhoksaa kooti maafan siti dubbadha
baayyee baayyeen dannun si jaaladhaa
akka fedhee ba'ee akka fedhee yooman galee beekaa
kanan sirraa dhabee isa kana beekaa
polisiin na helmaa hunduu harka harkaa
wan qubuu qixxeedhaa yoo ta'aa na harka,
Kan mulangoo kubbaa
isaa fiqlachoo hiraani gubbaa
yemmuun sii yaadadhuu garaa koo naguba
basee himmachuu dhaf hinqabu ka abbaa!!!
Jabbadha lammii koo rakkoon hunduu ni darbbaa!!!!!
posted by OromiaTimes @ 6:21 AM 0 Comments
posted by OromiaTimes @ 6:01 AM 60 Comments